Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Ngwá ọrụ mgbochi mmeko nwoke na nwanyị ọhụrụ
Ndị mepụtara SafetyNet ga-ewepụta onye nwere ike ịgbanwe egwuregwu n'ọgụ ahụ ịkwụsị mwakpo mmekọahụ na ịzụ ahịa mmadụ na galarị afọ ebere na ogbe ndịda Los Angeles na February 12, 2022.
SafetyNet na-enye iko ma ọ bụ mkpara mkpara nke, mgbe iwebata ọgwụ ndị "ndị nrụpụta" dị ka GHB, rohypnol, na ketamine, na-agbanwe na agba site na translucent gaa na-acha odo odo, na-eme ka onye na-aṅụ mmanya mara na etinyewo ọgwụ n'ime ihe ọṅụṅụ ha.
"Ebumnuche bụ ime ka a mara na e meela iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, na-ebelata ohere nke mwakpo mmekọahụ ma ọ bụ ịtọrọ," Reena Sehgal, onye ọka iwu na Los Angeles na-anọchite anya SafetyNet kwuru. "Ndị mmadụ nwere ike izu ike karị ịmara na ihe ọṅụṅụ ha ga-eme ka ha mara ma ọ bụrụ na mmadụ emee mgbalị imebi ikike ha."
A na-edina onye America n'ike n'ike ma ọ bụ mmegide mmekọahụ n'ihe dị ka sekọnd 68 ọ bụla, dị ka òtù na-emegide mmekọ nwoke na nwanyị RAINN siri kwuo, yana pasent ise nke mwakpo mmekọahụ akọpụtara nkewa dị ka ọgwụ sitere n'ike. Ngwaahịa ahụ, nke John Hopkins kwadoro, ga-edobe ya na gala.
Iko SafetyNet na ndị na-akpali akpali ga-adị na-ere ahịa ozugbo enwetara ego. A na-atụ anya na ngwaahịa a ga-adaba shelf n'ụlọ ahịa ihe nri, ụlọ ahịa mmanya na ebe ndị ọzọ site na Mee 2022.
"SafetyNet n'onwe ya ga-ebelata mwakpo mmekọahụ site n'ịchọpụta ọgwụ ndị a, ma eleghị anya ọbụna karị, ịdị adị ya ga-abụ ihe mgbochi," Sehgal kwuru. "Ndị na-edina mmadụ n'ike na ndị na-ere ahịa mmadụ ga-eche ugboro abụọ ma ọ bụrụ na enwere ngwaahịa dị njikere nke ga-ejide ha n'omume."
Ego sitere na mmemme ebere ahụ ga-erite uru RAINN, Lovehụnanya enweghị atụ, na ndị ọzọ anaghị akwụ ụgwọ maka ịkwụsị mwakpo mmekọahụ na ịzụ ahịa mmadụ.
SafetyNet na-akwado site na Sehgal Law PC, Lastine Impressions, na Broken Vase Productions. Ebumnuche ya bụ ibelata ọnụ ọgụgụ ndị ahụ nke ukwuu wee weta ngwaahịa n'ahịa nke ga-eme ka ndị mmadụ nwee ike zuru ike n'ịmara na mmanya ha dị mma iri.